Ngobusuku obandulela ukuvela okudayiswayo PocketBook 623 Touch 2 inkampani yokukhiqiza wanquma kulungiswe ngokuphelele uhla imikhiqizo yayo. amalungiselelo okusha okwakufanele babhekwe njengabezinye kulula ngangokunokwenzeka ukuze isebenze. Futhi lokhu imodeli kuwumphumela eside umsebenzi onzima okuhloswe ngaso izinguquko ukusebenza, esibonakalayo, nokunye. D.
Iqiniso lokuthi inkampani kumele ngezikhathi ubuyekeze imikhiqizo yayo ngaziwa ngokuphelele kubo bonke abadlali ngempumelelo emakethe. Ngokwesibonelo, njengoba kwenza enye umkhakha giant - Amazon.
Uma kuziwa imodeli wesibili ochungechungeni, lesi sifaniso esibi esasisandulele. Ukubukeka Cishe efanayo. Nokho, ku ukudayiswa kukhona imibala ehlukene. Leli bhokisi ingaba mhlophe, omnyama esiliva. I front ingxenye eyenziwe ngepulasitiki hhayi ecwebezelayo, futhi abushelelezi. Uhlangothi ezingemuva ihlukile phambi. Ngoba esetshenziswa ehlukile plastic, olubizwa nangokuthi "touch ezithambile". Ngenxa isakhiwo ayo iyunithi ngokuphephile esandleni. Yigcine ukhululekile ngisho emnandi, kangangokuthi ngisho inqubo eside ukufunda akusho ibakhathaze.
Isisindo ayikashintshi futhi ilingana 198 amagremu. Ubukhulu zedivayisi nazo esikhethiwe luwukulindelwa ukwenzela ukuthi kube lula futhi elula ukuthwala. umzimba Lower uqweqwe amadivayisi le njongo. Isikrini ivikelwe ingilazi, okuyinto ejwayelekile kulolu hlobo amadivayisi.
Iningi phambi iphaneli touch-sensitive kwesikrini, ngalo elula kunazo ukuze uxhumane sokusebenza. Enye incenye lebalulekile - kuyinto inkomba isimo. block ukhiye itholakala ngaphansi kwesikrini. Lezi izinkinobho zikuvumela ukuba ujike ikhasi noma ukushintsha phakathi izingxenye imenyu. Futhi, umsebenzi "Ekhaya" itholakala lapha. Uma ibhuku ivuliwe, ungasebenzisa iyunithi ukhiye Ungabonisa imenyu yamashothikhathi.
PocketBook 623 ekupheleni phansi zonke izakhi evamile sokusebenza. Lena mini-Jack for headphones, USB-isixhumi, elula njengoba indlela ohlanganyela nalo computer siqu futhi ishaja, bese kusukela kudivayisi inkinobho. Kukhona slot for micro-SD amakhadi. Kodwa on the namakhethini emaceleni uphela kungekho nezimbobo futhi akukho izidleke. Ngakho-ke, zonke eseduze endaweni eyodwa, ngokuvumelana abasebenzisi.
I emisha kuqala, okuyinto sobala lapho uthatha ezandleni PocketBook 623 Yiqiniso, HD isikrini futhi izibani kabusha. Ikhwalithi yesithombe lalilikhulu kakhulu kunalokho eqhathaniswa onobuhle odlule. ukukhanya zazihlanganisa kwenza isithombe esinemibala nakakhulu. Funda kulesi sikrini limnandi futhi ekhululekile, kuqinisekiswa abathengi. Umbhalo kuyahluka olubushelelezi futhi imiva. Ngaphezu kwalokho, ungahlala shintsha izilungiselelo ngazinye, izincwadi ezinjalo ukwenza okufunayo. I version zakudala izincwadi black on background elimhlophe, abanye abasebenzisi zingabonakala zingasho lutho futhi, ngakho kukho zihlanganisa ezihlukahlukene inhlanganisela. Lokhu kuholela PocketBook 623 ithuluzi siqu ngempela, okuyinto ivunyelaniswe ukunambitheka namaphunga izidingo umthengi.
Idivayisi akububonisi "eshaywa" Empeleni, ngenxa leso umbhalo uqala ukuphuma kuwo wonke amakhasi. Abagxeki abaningi izincwadi electronic ukulahla lesi sakhiwo ngenxa yalesi sizathu. Manje PocketBook 623 izinqolobane esikhathini esidlule le nkinga, zivimbela abanye ukuzivumelanisa ukufunda kusuka zokuxhumana ezisebenzisa ugesi.
I kwasemuva nokukhanya
Ukuze kukhanyisa LED esetshenziswa zithandwa. Basuke etholakala ngezansi onqenqemeni engezansi zedivayisi. Ukukhanya ukusakaza ngokulinganayo ngokusebenzisa ifilimu, okuyinto ifakwe Touch 623 PocketBook 2. Lokhu ubuchwepheshe Futhi wenzelwe ukuvikela amehlo umsebenzisi.
Ukugqama kungase kushintshwe uwedwa. Ngezinye izikhathi ukushuba kwasemuva is neze esidingekayo, futhi kuzobalwa kuphela ukuchitha idivayisi kwenkokhelo. Lapha kulapho ungakwazi ukushintsha ukugqama, isibonelo, ngo-50% uma kuqhathaniswa no-seqiwe. Kodwa ebusuku, lapho kubalulekile ikakhulukazi ukubona ngokucacile phambi isithombe esikrinini, i-course ithatha wonke ama-LED amandla. Matte ukubonisa isici PocketBook Touch 623 2 Izibuyekezo lwezici zalo ngokuvamile omuhle, abantu abaningi bathi Ukufundwa ukhululekile okuningi kulesi sikrini. ebusweni Capacitive ivikelwe kusukela imisebe yelanga , nezinye ukukhubazeka isithombe.
New PocketBook Touch 2623, ukubuyekezwa ngokuvamile omuhle, wathola processor izinga. imvamisa Its 800 MHz. 4 gigabytes memory yangaphakathi ngokomzimba ngokwanele ukuzivumelanisa kudivayisi futhi baqonde ukuthi yini okwazi. Esikhathini esizayo, ungakwazi ukuthenga le-SD-drive, okuzokwenza etholakalayo inani ulwazi oluningi. RAM 128 wamamegabhayithi. Lokhu kwanele ukuvula le ncwadi kwidivaysi yakho ngaphandle phezulu izinkinga futhi hang-ups.
Lokhu kusebenza kokubili FB2 format analog elula lelukhuni (PDF, DJVU, DOC). Ukufinyelela amafayela anjalo kuvula amathuba kakhulu umfundi PocketBook 623. Manual kuzosiza ukuxazulula nobunzima ezivamile ekusebenzeni. Kodwa thina akumelwe siwele umuzwa wokuthi idivayisi obusebenzayo nzima ukufunda. Eqinisweni, idivayisi enembile. imenyu Kwalo izilungiselelo eyakhelwe isikimu elula ukuthi kulula ukukhumbula. abathengi Abaningi bathi.
I degree of nokuxhumana ngombhalo futhi kuncike ifayela uqobo. Uma i-PDF uye waqaphela umbhalo ungqimba, kungashiwo yakopishwa noma eceleni ukuba design amanothi. Lesi isici ewusizo kakhulu - ukuze ukwazi ukudala amanothi kanye amanothi isidingo umbhalo. Zonke umsebenzi amafayela ithebhu. Bazokusiza ukubuyela ikhasi oyifunayo ngokucindezela uphawu uhlu lokuqukethwe. Lesi sikhathi ewusizo futhi abasebenzisi abanjengawe.
DJVU format akuyona njengoba obusebenzayo njengoba PDF, kodwa isisindo ezincane futhi compactness. Ngaphezu kwalokho, la mafayela bavame ngefeksi wencwadi yangempela. Uma kuziwa edition ubudala, umfundi angabona futhi amasu typographic ubudala, kanye layout Amakhasi.
Eyokuqala "e-abafundi" imodeli sokuzama ehlukahlukene ukuze umphelelisi ezihlukahlukene iziphakamiso, okwenza of devaysa wafana mini CCP. Nokho, manje zonke abakhiqizi (futhi PocketBook) uzame kwasekuqaleni ukunikeza abathengi ithuba kahle iya ku-inthanethi ngedivayisi entsha. Kuze kube yimanje, abafundi anemisila-Wi-Fi.
PocketBook 623, okuyinto ubukeza omuhle, akusiyo ithuluzi Ekhethekile Inthanethi. Ngokuzenzakalelayo, imenyu kwesikrini main njalo kuyinto inkinobho ukuthi uyisa umsebenzisi esitolo online. Kuyinto brand name. I-Akhawunti lapha lingavumelaniswa ngedivayisi, okufaneleyo kakhulu zokuxhumana. Ukukhethwa ocebile lwezincwadi kuzosiza kokubili labo abafuna ivolumu ethile emtatsheni wakhe, futhi labo abazi ukuthi yini ukufunda.
Nokho, ngenxa yokugcina kukhona enye isevisi sokusebenza. Lena yokuxhumana abathandi incwadi ReadRate. Faka kuwo ezihlukahlukene - ukuba ne-akhawunti yakho, noma ukuvumelanisa nge Facebook wakho. Umuntu ofunda is languishing kukhethwa futhi abazi lapho incwadi ukuchitha kusihlwa olungawavula amazinga nokukhethwa noma hlola amazwana owawudalwe abasebenzisi efanayo. Interface yomsebenzisi-friendly futhi ezihlukahlukene - yilokho unika ReadRate ubani.
Kodwa ezingosini ze-Internet le divayisi asihambisani kahle. Imenyu inesipheqi esakhelwe, okuyinto ngombandela kungavula kunoma yiliphi ikhasi ku-World Wide Web. Nokho, isicelo Umsebenzi lihlotshaniswa izinkinga ezithile. Amanye amakhasi ikakhulukazi ezinkulu uzovulelwa isikhathi eside, futhi idivayisi uzoqala sokuhudula izinyawo lesi. Konke lokhu - ngenakugwemeka izindleko format PocketBook 623. Iziqondiso usebenzisa isicelo ngasinye elikhona manual yomsebenzisi, okuyinto ebhokisini nedivaysi.
Phakathi kwezinye anezele kwasekuqaleni kufanele kuphawulwe isichazamazwi esakhelwe ezilimi zakwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, kukhona ethafeni ejwayelekile imidlalo, ikhalenda, wokubala, uphawula umsebenzi - kukho konke iDemo ukuthi kuyadingeka ukuze sizuze umhleli.
Idivayisi isekela izithombe ukubukwa amafomethi athandwayo. Kukhona mp3-player, letawuba kwalokho omkhulu ukuba ukufunda fun. Kuyo, njengokungathi umtapo has umtapo ayo umculo. Isidlali ofunda ithegi, ngakho akukho izinkathazo ngokushesha phakathi amafayela ocingweni lwakho noma usesha okuthize ku search angukhiye.
Amaphutha kanye nokulungisa
Uma PocketBook 623 Ayibalwa, kungenzeka idivayisi wayesaphaze ukushaja. Interface yomsebenzisi-friendly ngeke ukhohlwe ngokuntuleka amandla (uphawu nge ibhethri futhi iyabonakala noma yimuphi umbandela wokusebenza). Ngakolunye uhlangothi, kungase kwenzeke ishaja zokugwema noma enye ingxenye umfundi. Khona-ke kungcono ukuxhumana isikhungo ezikhethekile, lapho abasebenzi bazokwazi ukuchitha uphethwe izinga usebenzisa imishini ekhethekile.
Njenganoma iyiphi enye idivayisi, inkathazo engenzeka PocketBook yokulungisa 623. kwesikrini (isibonelo) uvame elihlobene ne izilonda matrix, lapho ukuveza ikhombisa lwesimo nhlobo noma akasabeli lapho izinkinobho kuthiwa sicindezelwe. Lokhu kungaba ukukhonza izizathu ezahlukene. Ngokuvamile zihlotshaniswa operation angenandaba, njengoba kuboniswa abasebenzisi ngokwabo. Ukulungisa PocketBook 623 Touch 2 (esikhundleni kwesikrini futhi izingxenye) zingenziwa futhi isiqinisekiso uma yisikhathi. Ngakho-ke, ngaphambi uya kudokotela onguchwepheshe, kubalulekile ukuhlola wonke amaphepha imibhalo wathola ekuzuzeni.
Ukulungisa PocketBook 623 Touch 2 ngokuvamile kuyadingeka esimweni umonakalo lokukhanda. Umenzi wenze konke ukuthi umzimba futhi isikrini ayikwazanga iphukile ukunakekelwa efanele. Konke liyadingeka kusuka umsebenzisi - qaphela uma ukuphatha ne inqubo.
Ikesi smartphone ngezandla zakho 6 onobuhle yasekuqaleni
Beta-hCG: ngesilinganiso sokukhulelwa